जीवनमा कसरी खुसी र सुखी हुने ? यस्ता छन्‌ उपायहरु – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठजीवनशैलीजीवनमा कसरी खुसी र सुखी हुने ? यस्ता छन्‌ उपायहरु
अक्सर हामी दिनमा खुसी धेरै हुन्छौ कि दुखी ? अर्थात हाम्रो धेरैजसो समय दुखी भएर बित्छ कि, सुखी भएर ? यसको लेखाजोखा हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, परिस्थिती, वातावरण आदिले गर्छ ।
शारीरिक र मानसिकसँगै बाह्य कुराहरुले पनि हामीलाई कहिले खुसी बनाउँछ, कहिले दुखी । कोहि चाहदैनन्, दुखी हुन । हामी सबै खुसी हुन चाहन्छौं । र, सधै त्यसको खोजीमा रहन्छौं । मीठो खानाको स्वाद लिएर होस्, पैसा कमाएर होस्, राम्रो लुगा लगाएर होस्, अरुलाई सहयोग गरेर होस्, हामी खुसी हुन चाहन्छौं ।
खासमा खुसी भन्ने कुरा भौतिक कुराबाट प्राप्त हुने होइन । यद्यपी त्यो खुसीको माध्याम भने बन्न सक्छ । जब मानसिक विकार हटाएर सकारात्मक सोंच, धारणाको विकास हुन्छ, खुसी आफै प्राप्त हुन्छ । अतः सुखी जीवनको लागि आफ्नो जीवनशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्वस्थ्य र सन्तुलित जीवनशैलीले हामीलाई दुखी हुने अवस्थामा पुर्‍याउँदैन । स्वस्थ्य जीवन र स्वस्थ्य मन नै खुसीको आधार हो । योग, व्यायाम, प्राणायम जस्ता कुराबाट पनि मनलाई शान्त र खुसी तुल्याउन सकिन्छ ।
स-सना यस्ता बाहाना छन्, जसबाट हामी खुसी हुन सक्छौं । आफुले उपलब्धी गरेको सफलतालाई स्मरण गर्नुहोस् । जीवनको कुन कुन क्षणमा, कसरी सफलता मिलेको थियो, मन्थन गर्नुहोस् । बाल्यकालको फोटो, खेलौना, लुगाफाटो हेर्नुहोस् । एकदमै मन मिल्ने साथीलाई बोलाएर विगतमा भोगेका रमाइला क्षणहरुको चर्चा गर्नुहोस् । बाल्यकालमा तपाईलाई जे कुराले खुसी तुल्याउँथ्यो, त्यही चिजलाई फेरी दोहोर्‍याउनुहोस् । जस्तो कि, खेलौनाहरु सजाउने, फनी भिडियो हेर्न, पेन्टिङ गर्ने, मन परेको सामग्रीहरु संग्रह गर्ने आदि ।
किशोरवयमा आफ्लाई असाध्यै मन परेको गीत सुन्नुहोस्, पहिरन लगाउनुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस् । विद्यालय/क्याम्पसको बेला खिचिएको फोटोको एल्बम निकालेर हेर्नुहोस् । पर्व, उत्सव, पारिवारिक जमघटलाई कसरी रमाइलो बनाउने भनेर घोत्लिनुहोस् । राम्रो गीत बजाएर मस्त नाच्नुहोस् । मीठो गीत सुन्दै रमाइलो पुस्तक पढ्नुहोस् । बगैंचामा फूलहरु रोप्ने, स्यहार्ने गर्नुहोस् ।